काठमाडौं महानगरभित्र ७५२ जनामा कोरोना संक्रमण (साउन २९ गतेसम्म ) - Subhay Postकाठमाडौं महानगरभित्र ७५२ जनामा कोरोना संक्रमण (साउन २९ गतेसम्म ) - Subhay Post
काठमाडौं महानगरभित्र ७५२ जनामा कोरोना संक्रमण (साउन २९ गतेसम्म )
सुभाय् संवाददाताAugust 15, 2020 मा प्रकाशित (२ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
काठमाडौं / काठमाडौं महानगरभित्र साउन २९ गतेसम्म ७५२ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । काठमाडौं महानगरको जनस्वास्थ्य महाशाखाले जानकारी गराए अनुसार कोरोना पोजेटिभ हुने व्यक्तिको संख्या ७५२ र मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । यस अवधिमा पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका १ हजार ५५४ जनाको कन्ट्रयाक ट्रेसिङ् गरिएको थियो भने यसमध्ये ५८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।यी केसहरु प्राय: साउन १५ गते पछिका हुन् ।
” यो संख्यामा केही तलमाथि हुन्छ । ठूला अस्पतालको विवरण महानगरमा आएको छैन । उहाँहरुले पनि महानगरमा बसोबास गर्नेहरुको परीक्षण र उपचार गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका कार्यालयहरुमा परीक्षण गर्नुभएको छ । यसरी गरिएका परीक्षणमध्ये केहीको संख्या महानगरलाई उपलब्ध गराइएको छ भने केहीको संख्या प्राप्त हुन सकेको छैन । यसकारण संख्यामा केही तलमाथि हुनसक्छ ।” जनस्वास्थ्य महाशाखाका निरीक्षक ज्ञानबहादुर ओलीले बताए ।
उनका अनुसार पूरा विवरण प्राप्त नभएकोले कति निको भएर फर्के र अरु कति संक्रमित पनि छन् भन्ने पूर्ण तथ्यांक अहिले नै दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
प्राप्त बिवरणअनुसा सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या वडा ४ मा देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिएको परीक्षणबाट आएका पोजेटिभ केस यही वडामा जोडिएकोले यस वडामा संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको हो । वडानं २ मा अहिलेसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस देखिएको छैन ।
जन स्वास्थ्य बिभागका अनुसार महानगरमा वडा १ बाट ३७ जना, ३ बाट प्रहरी अस्पतालबाहेक ३४ जना संक्रमितको संख्या दर्ता भएको छ । ४ बाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ६१ जना, ५ बाट १७ जना, ६ बाट १५ जना, ७ र ८ बाट क्रमशः १०/१० जना संक्रमित देखिएका छन् । वडा ९ मा ५ जना, १० मा ३८ जना, ११ मा १९ जना, १२ मा १२ जना, १३ मा ३३ जना, १४ मा ५६ जना, १५ मा १३ जना, १६ मा ४६ जना, १७ मा १४ जना संक्रमित देखिएका छन् । वडा १८, १९, २० र २१ मा मा १/२ जना देखिएका छन् भने वडा २२ मा ४ जना देखिएका छन् । वडा २३ मा १० जना, २४ मा २५ जना, २६ मा १७ जना, २७ मा ३४ जना, २८ मा २७ जना, २९ मा ३० जना, ३० मा १४ जना, ३१ मा २८ र ३२ मा ५३ जना संक्रमितको संख्या देखिएको छ ।
संक्रमितको पहिचान, उनीहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाहरुको खोजी र निगरानी गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले कन्ट्र्याक ट्रेसिङ् कार्यलाई तीब्र बनाएको बताइएको छ । यसका लागि वडा क्लिनिकका स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरु खटिएका छन् ।
संक्रमित देखिएका ठाउँमा वडा कार्यालयहरुले प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवतजावत बन्द गरेर निगरानी गरिरहेका छन् ।
( काठमाडौं महानगर समाचारको सहयोगमा)
स्वनिगःया विरह !
बखुंया गफ्फ् ! छगू न्ह्यैपुगु लुमन्ति !
म मरे पछि !
ज्यानमारा मल्ता !!
काठमाडौंमा मात्र २००८ जना संक्रमित , जताततै खुल्ला फुटपाथ र भीड, कोरोना नियन्त्रणका निम्ति प्रयास नगरेको भन्दै सरकारप्रति स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित !
बनेपाका मेयर बाडे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एक वडा अध्यक्षसहित ४ कर्मचारीमा कोरोनाको पुष्टि
काठमाडौं उपत्यकामा आज १,७४६ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए